रणवीर र दीपिकाको विवाहमा पाहुनालाई मोबाइल निषेध ! | Himalaya Post
रणवीर र दीपिकाको विवाहमा पाहुनालाई मोबाइल निषेध !
Posted by Himalaya Post | २६ कार्तिक २०७५, सोमबार १५:०९ |
बलिउडका स्टार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको विवाह अबको आजै हुँदैछ । इटालीको लेक कोमोमा १४–१५ डिसेम्बरमा उनीहरुको विवाह हुन लागेको हो । उनीहरुको विवाह कुन परम्परा अनुसार हुँदैछ ? वा विवाहको तालिका के छ ? भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरु पढ्नुस् ।
भारतीय समाचारका अनुसार राणवीर–दीपिकाको विवाहको सुरुवात १३ नोभेन्बरदेखि हुँदैछ । यस दिन नाचगान हुनेछ । जसमा नजिकका साथी र परिवारका सदस्य सामेल हुनेछन् । रणवीर–दीपिकाको विवाह इटालीको लेक कोमोमा १४–१५ डिसेम्बरमा हुँदैछ । जहाँ हलिउडका अन्य केही कलाकारको समेत विवाह भइसकेको छ ।
१४ नोभेम्बरमा दीपिका पादुकोणको संस्कृति अनुसार कोन्कणी परम्परा अनुसार विवाह हुनेछ भने १५ नोभेम्बरमा रणवीर सिंहको तर्फबाट सिन्धी रीति रिवाज अनुसार सात पटक घुमेर गरिनेछ । अर्थात् दुई अलग अलग रितिरिवाज अनुसार विवाह हुँदैछ ।
मीडिया रिपोर्टका अनुसार विवाहमा दीपिका दिपीका दुई फरक संस्कार अनुसार फरक पहिरन लगाउनेछिन् । मीडिया रिपोर्टका अनुसार विवाहमा दीपिका दिपीका दुई फरक संस्कार अनुसार फरक पहिरन लगाउनेछिन् । विवाहमा ठूला कलाकारहरुलाई पनि बोलाइएको छ । जसमा फराह खान, शाहरुख खान, सञ्जय लीला भन्साली, आदित्य चोपडा रअर्जुन कपूर लगायतका व्यक्तित्व लेक कोमोमा उपस्थित हुनेछन् ।
अझ रोचक त के भने विवाहमा उपस्थित हुने पाहुनालाई मोबाइल फोन निषेध गरिएको छ । विवाहलाई प्राइभेट राख्न वा विवाहका तस्बिर लिक नहोस् भन्नका लागि विवाह समारोहमा फोन नलिन फाहुनालाई अपील गरिएको छ ।
Previousदैलेखको सम्पदा अनुसन्धान गर्न विज्ञ भेला
Nextगलकोटमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल
अडिसन विवादबारे मिस नेपाल आयोजकले भन्यो, ‘यस्ता प्रश्न सोधिनु सामान्य’
२४ चैत्र २०७५, आईतवार १८:१८
युट्युवबाट चर्चामा आएका बाल गायक अशोक दर्जीको गीत सार्वजनिक (भिडियो)
२६ बैशाख २०७५, बुधबार १६:५२